देशभर आज १,४४२ संक्रमित थपिए : उपत्यकामा मात्र १,०३८, संक्रिय संक्रमितको संख्या कति? - शुभयुग
देशभर आज १,४४२ संक्रमित थपिए : उपत्यकामा मात्र १,०३८, संक्रिय संक्रमितको संख्या कति?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर ३, बुधबार (२ हफ्ता अघि)
५२ पटक पढिएको
३ मंसिर, काठमाडौं – बितेको २४ घण्टामा आज देशभर १ हजार ४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै आज थपिएका नयाँ संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ३८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा ८२२, भक्तपुरमा ४८ र ललितपुरमा १६८ जना गरी उपत्यकामा १ हजार ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
प्रबक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ७३१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५३८ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म कुल निको हुनेको संख्या १ लाख ८२ हजार ७८० पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै संक्रमितको कुल संख्या भने २ लाख १२ हजार ९१७ पुगेको छ । हाल संक्रमण निको हुने दर ८५.८ प्रतिशत रहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या २८ हजार ८७८ रहेको छ । यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप १२ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या १२५९ पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित विभिन्न १३ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, काभ्रे, कास्की, दाङ, रुपन्देही, पाल्पा र कैलालीमा ५०० भन्दा धेरै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
हाल मनाङमा मात्रै शून्य संक्रमित रहेको छ ।